Hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo dib u bilaabay wadahadalada doorashada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo dib u bilaabay wadahadalada doorashada
May 22, 2021 Abdi Omar Bile Somalia 0
Kulanka Muqdisho. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kulan ku saabsan doorashada oo u dhaxeeya Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka ayaa maanta oo Sabti ah ka furmay caasimada Muqdisho.
Kulankan oo sii socon doona ayaa diirada lagu saarayaa hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17-kii September la saxiixay, sida uu sheegay afhayeenka raysulwasaare Rooble.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wakhtigiisii 4-sanno ahayd uu dhammaaday ayaan ka qeybgalin kulanka kadib markii horantii bishan May uu sheegay in uu Raysulwasaaraha uu ku wareejiyay hanaanka doorashada.
Bilihii u dambeeyay ayaa waxaa khilaaf ka taagnaa hanaanka doorashada, taasoo keentay in baarlamanka wakhtigiisu dhammaaday ay sheegaan in muddo labbo sanno ah ay dowladda ugu dareen si loogu diyaagaroobo doorasho qof iyo cod, taasoo keentay cambaarayn weyn oo ka timid saaxiibada Soomaaliya oo sheegay in aysan marna taageeri doonin wax ku darsi ah.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin Axmed Cabdulaahi Cabdi ku riday xukun dil ah kadib markii lagu helay dilka Wasiirkii Howlaha Guud iyo Dib-u-dhiska kaas oo lagu dilay Muqdisho bishii lasoo dhaafay. [...]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Talaado ah safar ku tagay magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. Raysulwasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo. Safarka [...]